Kusatorera Zvakasarudzika Zvakaitika Zviri Kukuvadza Iwe | Martech Zone
Pane IRCE yegore rino muChicago, ndakabvunzurudza David Brussin, muvambi weMonetate, uye yaive hurukuro inovhenekera pamusoro pechinjo yekutarisira kwevatengi uye neruzivo rwavari kutarisira kubva kune vatengesi vari vese online uye kure. Iyo kesi yekushandurwa iri kukura yakasimba uye inogona kunge ichangosvika panhongonya.
Monetate's ichangopfuura Ecommerce Quarterly mushumo iri kuratidza kuti mabhureji emitengo akwira, avhareji odhi kukosha ari pasi uye mitengo yekutendeuka inoramba ichiderera. Kufananidza uye kuyedza kuri kuvhiringidza maitiro aya… kwete nekuda kwekurudziro yakagadziridzwa asi nekuti masaiti ari kuendesa matekinoroji aya ari kuwana nekuchengetedza vatengi nekuda kweyakagadziridzwa ruzivo rwevatengi.
Iyo Ecommerce Quarterly mushumo inoongorora zvisina kujairika muyenzaniso weanopfuura mabhiriyoni manomwe ezvekutenga zviitiko zvepamhepo uchishandisa chitoro chimwe chete dhata pane yega yega kota yekendari. Avhareji mukati mese mushumo inoverengerwa pane yese sampuro. Makiyi ekuita mashandiro, senge avhareji kukosha kukosha uye chiyero chekushandura, zvinosiyana nemaindasitiri uye mhando yemusika Aya mavhareji anoburitswa chete kutsigira kuongororwa mukuburitswa kweshumo, uye hazvina kuitirwa kuti zvive mabenchmark kune chero bhizinesi reecommerce.
Monetate masimba akawanda-chiteshi maitiro. Chimiro cheMonetate Platform chinotendera vashambadziri kuti vagadzire, kuyedza uye kuendesa huwandu husingaverengeke hwezviitiko zvemadhijitari zvakasarudzika zvisina kudikanwa kweIT kana kubvunza zviwanikwa pane chaiyo-nguva chikuva.
Monetate yeemail - Gadzira yako email uye ubatanidze kune yakasarudzika kumhara mapeji.
Monetate yeMerchandising - Zvemukati chigadzirwa kurudziro uye mabheji.
Monetate yeMafoni Mapurogiramu - Kugadzirisa uye kuyedza zvemuno nhare mbozha.
Monetate Yemunhu uye Kurudziro Ongororo
ne Monetate yeMunhu, iwe unogona kugadzira zvinoenderana nevatengi zviitiko pawebhu, email, uye nhare mbozha. Iwe unokwanisa kugadzirisa zvese ruzivo rwekutenga nekugadzirisa zvekufambisa zvinhu, mireza, mabheji, magamba, nezvimwe. Dhata zvinhu zvinogona kubatanidzwa kubva kuCRM yako uye POS pamwe newebhu, nzvimbo, maitiro uye dhata yedhata kuti uvandudze ruzivo rwevatengi pane yako saiti.
Iyo ROI yeMunhu
Nematambudziko eiyo inogara ichikura pamusika pamusika uye makwikwi, kuita kwemunhu hakusi kungopa kudzoka pane kudyara, kuri kuita kukosha.
Kipling ichangobva kuburitsa grid yekukurudzira chigadzirwa kune yayo peji remba neMonetate. Kunyangwe ichikosha mukati uye yega, kambani yakatora danho rinopfuurira nekuyedza kuiswa. Imwe vhezheni yakaratidza zvigadzirwa zvechigadzirwa pamusoro peji asi imwe vhezheni yakaratidza gridhi pazasi peji. Nekuda kweizvozvo, timu yakawedzera shopper kubatanidzwa uye yakamisikidza yakanakisa nzvimbo yekumisikidza chiyero chekushandura.
Iine huwandu hwekushandurwa kwe7.29 muzana uye 9.33 muzana zvakateerana, ese ari maviri akapfuudza chiyero chesaiti chekushandurwa kwenzvimbo ye1.64 muzana.
Tags: David brussinzvine simba zvemukatiemail optimizationtsambambozha personalizationmachine learningkuita marioptimizationPersonalizationchigadzirwa kurudzirosaiti optimizationsaiti kuyedzwatarisa